Archive du 20190730
Raveloson Constant “Kajy politika no tsy hamoahana ny lalàna mifehy ny fanoherana”
Mbola manohy ny fomba fiasan’ny teo aloha ihany ny fitondrana amin’izao.
Masy Goulamaly, depioten’i Tsihombe Handroso tolo-dalàna hampanjakana ny miralenta
Tsy mahaleotena irery ny vehivavy any am-boalohany, amin’ny ankapobeny, raha hiditra eo amin’ny sehatra ara-pôlitika, araka ny fandinihan-dRtoa Masy Goulamaly Marie Jeanne d’Arc, solombavambahoakan’i Madagasikara voafidy tany Tsihombe,
Fikarakarana fifidianana « Tsy matotra ny fanjakana ! »
Amin’ny alalan’ny fifidianana ihany no tokony hakana fahefana ao amin’ny firenena demokratika sy mandala ny atao hoe repoblika, hoy ny filohan’ny antokom-bahoaka malagasy, Dany Rakotoson.
JAMES RATSIMA Kandida Ben’ny tanànan’Antananarivo
Mivonona tanteraka hiditra amin’ny raharaha politika Atoa James Ratsima. Hilatsaka hofidiana Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra mantsy ny tenany raha sitrapon’Andriamanitra raha tsy hilatsaka ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana.
Razafinjatovo Willy “Tokony hanana depiote vao mitonona ho mpanohitra”
Manana ny fomba fijeriny manoloana ireo mitonona ho mpanohitra ihany koa ny Maitre Olala na Razafinjatovo Willy.
COSAFA Women’s Championship 2019 Nanainga omaly nihazo an’i Afrika Atsimo ny vehivavy Malagasy
Hotontosaina atsy amin’ny Port Elisabeth atsy Afrika Atsimo manomboka amin’ny alarobia 31 jolay 2019 izao ny fifaninanana baolina kitra vehivavy “COSAFA Women’s Championship 2019” izay karakarain’ny Cosafa “Council Of Southern Africa Foot-ball Associations”
Baolina kitra sokajy Ligue 2 eto Analamanga Voahosotra ho tompondaka 2019 ny ekipan’ny Net Foot
Ny ekipan’ny Net Foot Mahamasina no voahosotra ho tompondakan’ny fifaninanana baolina kitra Ligue 2 taona 2019 eto Analamanga,
Metanire ao anatin’ny All Star any Etazonia Hifandona amin’ny Atletico Madrid rahampitso
Mamiratra ary anisan’ireo mpilalao sangany indrindra any Etazonia i Romain Metanire ao anatin’ny ekipan’ny Barean’i Madagasikara, izay milalao any amin’ny Minnesota United.
Alarobia Hikatona ny Ivon-toerana fitsaràna fiarakodia
Tsy hisokatra ny Ivon-toerana fitsaràna fiarakodia (centre de la sécurité routière) eny Alarobia noho ny asa fanamboaran-dàlana mampitohy ny « rond-point » Ivandry sy Tsasarasaotra.
Famoronana tetikasa sy fandraharahana Tanora miisa 6 notolorana 500 Euros avy
Sakana ho an'ny tanora Malagasy miditra amin'ny tontolon'ny fandraharahana eto Madagasikara ny tsy fahampian'ny enti-manana hanatanterahana tetikasa. Hany ka mivoaka sempotra tanteraka izay mba te hanangana ny orinasany manokana.
Madagasikara sy Inde Hanamafy fiaraha-miasa amina sehatra maro
Manantena ny hitazona sy hanamafy orina bebe kokoa ny fiaraha-miasa efa misy eo amin’i Inde sy i Madagasikara, ny Ambasadaoro vaovaon’ny Repoblikan’i Inde, miasa sy monina eto amintsika, Andriamatoa KUMAR Abhay,
Antananarivo sy ny manodidina Mihamahazo vahana ny areti-maso
Ankoatra ny aretin’ny taovam-pisefoana sy ny tazo dia mihamahazo vahana ihany ny areti-maso amin’izao fotoana izao. Ireo mponina ao anatin’ny distrikan’Antananarivo Atsimondrano no tena mahita faisana amin’izany herinandro lasa izay.
Andraisoro sy Ambatokaranana Nahazo lalankely
Taorian’ny fitarainan’ireo mponina eny Andraisoro sy Ambatokaranana voarain’ny avy eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra dia nanatanteraka fitsidihana teny ifotony ireo tompon’andraikitra avy eo anivon’ny CUA omaly,
Fiara hanenjehana dahalo Tsy tonga any amin’ny tena mila azy akory ?
Namparomotra ny dahalo ny fampirantiana ireo fiara tsy mataho-dalana nefa tsy tonga any ifotony ihany hatramin’izao raha ny fandiniky ny mpitandro filaminana sasany.
Zazamenavava nariana tao an-gabone Noraisim-potsiny ny reniny, karohina ny nahabevohoka azy
Mora nokarohina ilay reny nahavanon-doza raha ny fampitam-baovao avy any Betroka.
Fanondranana olona mankany Arabia Saodita 6 hetsy ariary isaky ny vehivavy no tangosan’ny mpanao trafika
Vola 600.000 ariary isan’olona no alain’ny mpanondrana tamin’ireo tovovavin’ny faritra avaratra atsinanan’ny Nosy, araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena.
Fanafihana ny depiote Tody Arnaud Melohin’ny “collectifs des candidats”
Nijoro avy hatrany ireo kandidà tsy miankina izay nivondrona ao anatin’ny “collectifs des candidats”, taorian’ny herisetra nanjo ny depiote Tody Arnaud, ary nanameloka ny herisetra nanjo azy, ny faramparan’ny herinandro lasa teo izy ireo.